Noho ny tsy fisian’ny fitarainana napetraky ny renin’Ikalaneny dia tsy nisy nahalala fa karohina izy. Natoky loatra ny reniny fa tsy hamono azy ny rainy, satria tena zanany naterany izy io. Mbola sahirana nandevina an’i Heritiana rahateo ry zareo.
Araka ny fitantaran’ity zaza ity dia nahita maro ny namonoan-drainy ilay zokiny izy ary efa nampiasan’ny rainy herisetra rahateo koa. Misy diana fanakendana amin’ny tendany. Maratra, ohatra ny notrobarana zava-maranitra la menamena ny masony iray. Misy ratra ny tongony.
« Nodorany tamin’ny « briquet » ny tanako. Nandramany nokendaina aho, fa efa mamo sy mifoka sigara izy amin’io », hoy ny fitantaran’ilay zaza. Nila fanampiana tamin’ny Sendikan’ny matihanina amin’ny asa sosialy (SPDTS) ny fianakaviana, ka ny tambajotrany no nahitana fa ao amin’ny BMH ity zaza ity.
« Nitsoaka ny dadanay rehefa avy nampijaly ahy. Nisy olona nanatitra ahy taty », hoy ihany fitantarany nahatonga azy tao amin’ny BMH. Hiakatra Fitsarana amin’ny 17 aogositra moa ity raharaha ity ary efa miandry any am-ponja ilay raim-pianakaviana tsy mifaditrovana.